CVE Taxanaha Joogtada ah ee Iskuxiran Wershadleyda Chiller iyo alaab-qeybiyeyaasha. Hawada
CVE Taxanaha Joogtada ah ee Magnet Iskuxiraha Iskuxiraha Qeybaha Chiller
Gawaarida xawaaraha sare ee isku-dhafan ee isku-dhafan
PMSM-ta ugu horreysa adduunka ee leh awood-sarre iyo xawaare sare ayaa loo adeegsadaa qaboojiyahaan bartamaha ka shaqeynaya. Awooddiisu waxay ka sarreysaa 400 kW xawaareheeda wareega wuxuu ka sarreeyaa 18000 rpm. Waxtarka mootadu wuxuu ka sarreeyaa 96% iyo 97.5% ilaa ugu badnaan, kana sarreeyo heerka heerka 1aad ee heer qaran ee waxqabadka mootada. Waa is haysta oo miisaanka culus. Xawaaraha sare ee 400kW PMSM wuxuu culeyskiisu le'eg yahay 75kW AC induction motor. Adoo adeegsanaya tiknoolajiyada qaboojiyaha buufin ee qaboojiyaha si loo qaboojiyo stator iyo rotor, heerkulka mootada waa la xakamayn karaa ilaa 40 ℃, iyadoo la hubinayo hawlgal hufan.
Gawaarida xawaaraha sare ee si toos ah u wada laba-heerQeybtu waxay qaadataa matoor xawaare sare leh oo laba-marxaladood si toos ah u wada. Gawaarida xawaaraha sare leh iyo 2 xargaha xargaha ayaa la joojiyay, taas oo hagaajin doonta waxtarka waxayna yareyn doontaa luminta farsamada ugu yaraan 70%. Iyada oo wadista tooska ah iyo qaabdhismeedka fudud, kombaresarada si kalsooni leh ugu shaqeyso cabir yar. Mugga iyo miisaanka kombaresarada waa 40% oo keliya isla awoodda wax-qaboojiyaha caadiga ah. Iyadoo aan lahayn buuq-soo-noqnoqodka sare ee qalabka-xawaaraha, codka hawl-qaboojiyuhu aad ayuu u hooseeyaa. Taasi waa 8dBA ka hooseysa unug caadi ah.
Naqshad dhan oo ah “wideband” naqshada pneumatic
Impeller iyo faafiyaha ayaa lagu hagaajiyay si loo ogaado hawlgalka waxtarka sare ee kombaresarada hoos yimaada 25-100% xamuul. Marka loo barbardhigo naqshadda caadiga ah ee ku saleysan hawlgalka culeyska buuxa, qaabeyntani waxay yareyn kartaa waxtarka waxtarka kombaresarada. Qalabka wax lagu beddelo ee 'chirifler centrifugal chiller' wuxuu garwaaqsanayaa xakamaynta awoodda xawaaraha isbeddelka ee kombaresarada iyo xagalka furitaanka isbeddelka ee muraayadaha hagaha kaas oo bilaabaya inuu hoos udhigo culeyska 50 ~ 60%. Si kastaba ha noqotee, taxanaha taxanaha 'Greek CVE chiller' wuxuu si toos ah u beddeli karaa xawaaraha kombaresarada ka hooseeya 25 ~ 100% xamuulka si loo yareeyo dhuujinta qulqulka hagaha hagaajinta iyo hagaajinta waxqabadka shaqada dhammaan xaaladaha.
Ku rakibtay inverter sine-wave
Adoo adeegsanaya tiknoolajiyada kontoroolka aan dareemeyaasha lahayn, mashiinka mootada waa la dhigi karaa iyadoo aan la baarin. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada hagaajinta PWM, rogaal celiyaha wuxuu soo saari karaa mowjad aan fiicnayn si loo hagaajiyo waxtarka mootada. Inverter si toos ah ayaa loogu dhejiyaa cutubka, isagoo badbaadinaya booska loogu talagalay macaamiisha. Intaa waxaa dheer, dhammaan fiilooyinka isgaarsiinta waxay kuxiran yihiin warshadda si loo wanaajiyo kalsoonida unugga.
Fidiyaha faafiyaha yar ee viscosity-ka
Naqshadeynta muraayadda yar ee isku-fidaha yar iyo hagaha hawo-mareenka ayaa u rogi kara gaas-xawaare sare gaaska cadaadiska sarreeya oo wax ku ool ah si loo ogaado soo kabashada cadaadiska. Hoos u dhaca culeyska, leexashada vane-ka waxay yareysaa luminta dib u socodka, waxay hagaajisaa waxqabadka culeyska qeyb ahaan, waxayna kordhisaa qeybta howlgalka ee qeybta
Marka loo barbardhigo nidaamka qaboojiyaha hal-marxaladda ah, isku-buufinta laba-marxaladood ah waxay hagaajineysaa hufnaanta wareegga 5% ～ 6%. Xawaaraha wareega ee kombaresarada ayaa hoos loo dhigay si kombaresarada loogu kalsoonaan karo oo waara.
Waxtarka sare ee hermetic impeller
Qalabka kombaresarada waa mid heer sare ah oo hermetic ah, kaas oo ka waxtar badan oo lagu kalsoonaan karo marka loo eego qalabka wax lagu duubo. Waxay qaadataa qaab-hawleedka 3-cabbir ee hawada si ay u noqoto mid la qabsi badan. Iyadoo loo marayo falanqaynta cunsuriga, 3-isku-duwidda mashiinka kormeerka, tijaabada dheelitirka firfircoon, tijaabada xawaaraha dheeraadka ah iyo tijaabada dhabta ah ee xaaladda shaqada dhabta ah, waxaa la hubiyaa in qalabka wax lagu buuxiyo uu buuxiyo shuruudaha naqshadeynta iyo inuu awood u leeyahay hawlgal deggan. Impeller iyo usheeda dhexe aasaasiga ah waxay qaataan isku xirnaanta aan furaha lahayn, taas oo ka fogaan karta feejignaanta walaaca qayb ahaan iyo dheelitirka dheellitirka rotor-ka ee sababa isku xirnaanta muhiimka ah, sidaas awgeedna hagaajinta xasilloonida hawlgalka kombaresarada
Kala-beddelka kuleylka sare
Dusha sare ee sarrifka kuleylka waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan habka wareejinta kuleylka. Waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo cadaadiska socodka luminta iyo isticmaalka tamarta. Qaboojiye hoosaadku wuxuu ku qalabeysan yahay salka hoose ee hawo-mareenka. Iyada oo leh xakameyn badan oo socodka ah, shahaadada qaboojiyaha waxay noqon kartaa 5 can. Guddiga go'doominta dhexe wuxuu qaataa tuubo khafiif ah oo laba jibbaar ka badan dhuumaha dunta leh si loogu daro guddiga taageerada, sidaas darteed, dhuumaha naxaasta ah kuma waxyeeloobi doono saameynta qaboojiyaha xawaaraha sare leh. 3-V naqshadda saxanka tubbada jeexjeexan ayaa loo qaatay si loo damaanad qaado saameynta shaabadaynta.
Nidaamka xakamaynta sare
Waxqabadka sare ee 32-bit processor iyo processor-ka dhijitaalka ah ee DSP ayaa la isticmaalaa. Xaqiijinta ururinta xogta sare iyo awoodda waxqabadka xogta waxay hubineysaa muuqaalka waqtiga dhabta ah iyo saxsanaanta nidaamka xakamaynta. Si wada jir ah ula midabada shaashadda taabashada LCD ee midabada leh, isticmaalehu wuxuu si fudud u ogaan karaa xakamaynta otomaatiga iyo xakamaynta gacanta ee khaladaadka Waxay sidoo kale qaadataa caqli Fuzzy-PID algorithm xakamaynta iskudhafka, kaas oo lagu dhajiyay tiknoolajiyad caqli leh, tikniyoolajiyada jahwareerka iyo algorithm xakamaynta PID ee caadiga ah, sidaa darteed nidaamku wuxuu awood u leeyahay xawaaraha jawaabta degdegga ah iyo waxqabadka deggan.
Hore: Qaybaha Biiyaha
Xiga: Sanduuqa Sunta Jeermiska Hawada ee Nidaamka HVAC
Nidaamka Chiller-ka Warshadaha
Ku marooji Nidaamka Chiller
Nidaamka Chiller Water
Laga soo bilaabo 2007, Airwoods waxay u heellan tahay inay bixiso hvac dhameystiran, qol nadiif ah iyo xalalka daaweynta VOC ee warshadaha kala duwan. Waxaan hiigsaneynaa inaan adduunka u gaarsiino tayada hawada wanaagsan ee dhismaha wax soo saar tamarta ku habboon, xalalka la hagaajiyay, qiimaha qiimaha ku habboon iyo adeegyada waaweyn.
Room 2101, Xarunta Dhexe Xarunta Dhismaha No.25, Tian An Hi-Tech Ecological Park, Maya 555 Panyu Ave, Degmada Panyu, Guangzhou, Shiinaha